Ọnụ ụzọ ntanetị akwa ntanetị China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ ọrụ UPVC,Ogige Nchekwa Nzuzo,Mbugharị ụlọ nkwụnye ego
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ụlọ Nri Igwe Nchekwa Ọnụ > Ọnụ ụzọ ntanetị akwa ntanetị
Ọnụ ụzọ ntanetị akwa ntanetị
Ihe Nlereanya.: HF-J015
Curtain Thickness: 0.8/1.2/1.5mm
Material:: PVC Fiber+Stainless Steel
Opening Frequency:: 1000-1500times/Day
Diver System:: German Sew, China Sej Or Snma
Control System:: Holip/ Japan Mitsbushi
Special Function:: Sound+Temperature+Fir Proofing
Ubu oke: 300 Set/Sets per Month
Ebe Mmalite: Guangdong, China (Isi obodo)
Akwụkwọ: CE SGS ISO:9100
Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara arụmọrụ nke nkwekọrịta ijikọta nkwụsịtụ.
Mgbe a na-emetụta ahụ ahụ n'ụzọ na-enweghị isi, ọ na-apụ na egwu ahụ ma na-emezigharị nlọghachi mgbe ọ na-aga. Ọdịdị a anaghị eme ka ọrụ ahụ dị mma ma dị mma, kama ọ na-arụ ọrụ ihe karịrị ugboro 150,000 kwa afọ n'enweghị ọdịda. Ọ na-agbatị ndụ nke ngwaahịa ahụ ebe ọ na-ebelata ihe mgbakwụnye ihe na nrụzi ọrụ.
Ọnụ ụzọ na-agagharị na mpụga / mpụga, nke a na-eji na-arụ ọrụ na netwọk ugboro ugboro. Okpokoro windo na-eguzogide oghere na-eguzogide ọnụ ụzọ nke windo na-eguzogide ya: ọ bụ na arịrịọ maka windo windo ụzọ mepere emepe iji mepụta), ezigbo ifufe na-eguzogide ọgwụ, nke kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ dị n'èzí na rịọ arịrịọ oghere dị n'ime, akara, nrịba ama-na-egosi na-ekpuchi, na-echebe ebe ọrụ.
* Ime ụlọ, n'èzí nke arịrịọ na-eguzogide ọgwụ ifufe / okpomọkụ.
* Ụlọ ọrụ siri ike, Ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ nri, ngwá electronic, ọgwụ, warehousing, nkwakọ ngwaahịa, mbipụta, ụlọ ọrụ na-ere ọgwụ, ụgbọala, arụpụta.
* Ụlọ ọrụ ahụ Na-arịọ arịrịọ dị elu na ahụike gburugburu ebe obibi.
Ọnụ ụzọ mgbochi mgbochi dị nro nwere nhazi ihe owuwu dị mfe, nke bara uru iji arụ ọrụ nke ọma, na-ebelata oge nke ịrụzi ma dochie akụkụ ndị dị mma, na-eme ka ọ dịkwuo ogologo oge na ọrụ ndụ nke ngwa ahụ, a pụkwara imechi ákwà mgbochi ahụ nke mmetụta mberede, na n'oge mgbatị Akwụsịtụ, ọ dịghị mkpa iji aka rụọ ọrụ ma rụgharịa usoro ahụ dum.
A na-etinye ngwaọrụ egwu na n'akụkụ abụọ nke kọlụm ahụ.
Ihe eji emepụta ngwaahịa a bu oru nke enweghi nsogbu na ihe ruru 150,000 ugboro kwa afo. O nwere ihe kachasị dị irè na ụgwọ ntanye kachasị dị ala.
Asambodo anyị s
Ọkwa dị elu nke ụzọ nchekwa nchekwa nchekwa akpị oyi Kpọtụrụ ugbu a
Ihe mkpuchi nchekwa igwe mkpuchi PVC Kpọtụrụ ugbu a
Ebe nchekwa nchekwa ohuru dị ọkụ maka nri Kpọtụrụ ugbu a
CE kwadoro ụzọ nchekwa ngwa ngwa ebe nchekwa oyi Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa eji emechi PVC ngwa ngwa Kpọtụrụ ugbu a
Automatic High ọsọ oyi nchekwa ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa nchekwa nchekwa ngwa ngwa nchekwa PVC dị elu Kpọtụrụ ugbu a
CE kwadoro igwe mkpuchi igwe na agba ngwa ngwa Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ UPVC Ogige Nchekwa Nzuzo Mbugharị ụlọ nkwụnye ego PVC Ụlọ Ọrụ PVC Ụlọ Ọrụ PVC Ngwaahịa Ụlọ Ọrụ Nchebe Ụlọ ọrụ PVC akpaaka ọrụ Uche Ụlọ Ọrụ Nri